Vita Long carrots: nkọwa, foto, àgwà, atụmatụ nke na-eto eto - Karọt iche - 2019
Onye ọ bụla na-eme ka ha nweta àgwà ha na àgwà nke ihe oriri ahụ: uto dị mkpa nye mmadụ, idebe àgwà dị mkpa nye mmadụ, ọdịdị na ọgaranya dị mma nye onye. Ihe a niile - njirisi ndị ị nwere ike ịnyagharịa site na ịhọrọ ọkwa. Ugbo ala nile di iche iche bu "Amsterdam", "Nantes", "Flaccus", "Shantenay", "Berlikum", "Mini-carrots", "Carrot Parisian" na okpuru kariri. Ụdị nke ọ bụla na-eweta ụdị dịgasị iche iche.
Anyị ga-atụle otu n'ime ihe dị iche iche nke ụwa - "Ogologo Vita", nke sitere na cultivar flakka, ka anyi mata ihe uto ya na njirimara nke oma na onodu na-eto eto.
Omume nwere ike na pests
Nke a bụ ụdị "Vita Long". Anyị na-ahụ n'ihu anyị nnukwu karọt buru ibu, ọdịdị ọdịdị, àgwà nke Flaccus niile. Ọ nwere obere ike isi; Dị ka nkọwa nke ọtụtụ gardeners - nnọọ ụtọ na ezi kemmiri ihe. Ogologo osisi mgbọrọgwụ na-eru 25-35 cm na 3.5 cm ke dayameta, enwere ọgaranya nke ọma. Ihe mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ site na 100-250 g, ihe nrịbama - 160-170 g.
"Ogologo Vita" na-ezo aka na-ajụkarị oge, osisi na-akụ na May - mmalite June na-egbute na mbubreyo September. Ihe dị na carotene dị ala karịa ụdị nke Amsterdam na Nantes, ma ọ bụ naanị ntakịrị. Ihe dịgasị iche iche nwere ezigbo njide dị mma ma bụrụ ihe na-eguzogide ọgwụ mgbochi, nke mere ka ọ dị nnọọ transportable. N'ime ọnwa asatọ nke nchekwa (njedebe nke September - njedebe nke May), n'okpuru ọnọdụ nchekwa dị iche iche, ọ nwere pasent pasent dị pasent:
ájá nchekwa - 5.2%;
na igbe - 4.6%;
na akpa plastic - 3.5%.
Ị ma? Carotenoids na-agbakọta n'ọbara elu ahụ ma nye ya agba mmanụ. Ndị na-azụ anụ ụlọ na-eji nlezianya a eme ihe iji nye ụdị anụ ọhịa na-acha uhie uhie na agba agba. O nweghị ihe na-emerụ ahụ ike ma na-agafe mgbe njedebe karọt kwụsịrị.
Ọnụego nke alụmdi na nwunye zuru oke dị ala, ya bụ, mgbọrọgwụ ihe ubi nke furu efu ihe onwunwe ha na ihe ndị ọzọ - 1%. Mgbe echekwara na akpa, ntụpọ ọcha na-emetụtakarị carrots - ihe dị ka pasent 24 nke ihe ọkụkụ ahụ, pasent ahụ tụfuru budata mgbe echekwara na igbe - ihe dị ka pasent 15, ọ bụ ezie na pasent nke ọnwụ na-abawanye na nchekwa dị otú ahụ
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ maka ụdị carrots ndị dị ka: "Samson", "Shantane 2461" na obere carrots.
"Ogologo Vita" dị mma iji mee nri n'ozuzu. Tinyere, mgbọrọgwụ ahụ dị nnọọ nro ma dị nro maka ojiji maka nkwadebe maka ire ụtọ ụmụaka ma ọ bụ juices. Otú ọ dị, maka nzube ndị a, ọ ka mma ịhọrọ ụdị ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ: "Ụmụ", "Karotan", "Emperor" ma ọ bụ "Honey-sugar".
Uru na ọghọm dị iche iche na-ekpebisi ike site na ịchọrọ ihe dị iche iche. N'ime uru ndị a nwere ike ịkpọ:
obere ntakịrị ọnwụ n'oge nchekwa ogologo oge;
enweghi nsogbu maka ọnọdụ na-eto eto;
nghota na-eguzogide ọrịa ndị ọrịa;
ezi uto: mkpụrụ osisi ahụ bụ ihe dị nnọọ ụtọ na ụtọ pulp.
Ị ma? Anyị na-ahụkarị carrots oroma, ma e nwere mkpụrụ osisi na-acha odo odo, edo edo na ọcha. Agba na-ekpebi site pigmenti: oroma - carotene, violet - anthocyanins, odo - lutein.
Ihe na-abaghị uru bụ ihe aka ike ma ọ bụ kama àgwà nke ụdị dịgasị iche iche, kama ịdaba n'ezie:
enwere ụdị sweeter na juicier dị iche iche, dịka "Karotan", "Ezigbo afọ", "Sankina ịhụnanya" ma ọ bụ "Emperor";
enwere ihe dị iche iche ka mma idebe, ma àgwà kasị njọ gastronomic: "Shantone Skvirskaya" ma ọ bụ "Narbone".
Mgbe ị na-ahọrọ ebe maka carrots na ubi gị, buru n'uche ihe ndị dị mkpa dị ka ọkụ, ụdị ala, ụdị osisi nke carrots ga-ebikọ ọnụ. Ma, n'ezie, nye onwe gị ezigbo nlekọta maka ihe ndị na-eme n'ọdịnihu, nke mere na ị gaghị aga ụkwụ n'etiti ndị carrots.
Họrọ ebe dị mma, ọ bụghị nke ndị ọzọ, omenala dị elu. Ọ bụrụ na agbata obi agaghị ekwe omume - jide n'aka na carrots dị n'ebe ndịda nke ndị agbata obi ha dị ogologo. Site n'enyeghi ìhè, enwere ike iguzo n 'onu ogugu ruru iri abuo na ato na ihe omuma nke ihe ubi.
Carrots chọrọ ala ndị na-eme nri. Ezigbo ihe dị mma na ikuku na ugbo na ala aja, sod-podzolic, chernozem ma ọ bụ ụlọ peat. Ọbịbịa kwesịrị ịbụ onye na-anọpụ iche, obere ihe ndị dị na ntughari nke mmeghachi omume acidic ga-ekwe omume. N'ebe kwesịrị ekwesị maka carrots, mmiri ekwesịghị ịdị na-emetụta, n'ihi na nke a na-emetụta uto nke mgbọrọgwụ ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ntụpọ ma na-eyigharị ya.
Ọ dị mkpa! Ọ gaghị ekwe omume ịze mmiri na ala ozugbo na nri tupu ị kụọ, n'ihi nke a, uto ihe ọkụkụ ahụ ga-adị ilu.
Ezigbo ndị na-ebu maka carrots bụ osisi nke ezinụlọ nightshade (tomato, poteto), ugu (cucumbers, skwọsh), mkpo (agwa, agwa). Ejila ihe ndị a na-eme site na kụrụ ihe ndị nwere ọrịa na pests ndị dị ka: dil, pasili, parsnip, cumin.
"Ogologo Vita" ka mma ịkụ ihe na mmiri, dị ka mgbọrọgwụ sitere na kụrụ akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ enweghi ike idozi mma. Iji nweta ihe ọkụkụ na etiti - ọnwa Septemba, a ghaghị ịkụ mkpụrụ dị n'etiti afọ May.
Mkpụrụ nkwadebe na-agụnye ịkụ ala nke stratum corneum na disinfection:
Sook. Ọbụna osisi karọt ọhụrụ nwere obere ọnụego germination - banyere 50-60%. Iji meziwanye ihe ngosi a, a na-etinye mkpụrụ osisi na mmiri ọkụ ruo awa 4-5 ma ọ bụ na mmiri n'ime ụlọ okpomọkụ maka otu ụbọchị. Mgbe o wepụsịrị ihe ihe ọkụkụ si na mmiri mmiri, a na-akpọ ya ọkụ na okpomọkụ ụlọ ruo mgbe ọ ga-agbanye.
Disinfection. Ọ bụrụ na a na-echekwa mkpụrụ ndị ahụ na ọnọdụ nke iru mmiri dị elu ma ọ bụ na ị nwere ihe ndị ọzọ mere ị ga-eji chee na ọnụnọ nke fungal spores dị, n'ihi na ọ ga-aka mma ka ịme mgbochi. Maka mgbochi nke fungal na ọrịa ndị ọzọ, ọ bụghị tinye ya na-emikpu n'ime 0.1-0.3% ngwọta nke potassium permanganate (ihe dịka 1 g nke potassium permanganate kwa 200-300 ml mmiri) maka oge 1-1.5, wee saa mmiri na-agba agba. Ihe ngwọta nke zinc sulphate (20 mg kwa 100 ml mmiri) dịkwa mma maka disinfection, nke a pụrụ ịzụta na ụlọ ahịa ọ bụla.
Mụta otu esi eto akwụkwọ nri ndị dị ka poteto, turnips, cucumbers na zucchini si na mkpụrụ.
A na-agbakọọ atụmatụ ịgha mkpụrụ ahụ dabere na nha nke mgbọrọgwụ na nkwụsị nke n'elu. Ihe ndị a na - egosi na ịgha mkpụrụ carrots. Maka "Vita Long" dị iche iche, usoro ihe ọkụkụ bụ:
na omimi nke grooves kwesịrị 3-5 cm;
mkpụrụ dị mkpirikpi n 'anya nke 1-2 cm site na ibe ya;
ebe dị anya n'agbata oghere dị iche iche dị iche iche ga-abụ ma ọ dịkarịa ala 15-20 cm, ma ọ bụghị ya ga-esi ike ilekọta osisi.
Ọ bụghị nanị na mgbọrọgwụ ihe ubi dị mma maka nri, kamakwa n'elu. Anwụrụ ọkụ n'elu tea tii, nke nwere mmetụta bara uru na ọnọdụ nke ọbara, karịsịa site na varicose veins, ma na-akpali epithelial usoro.
Ọ dị mkpa! Ọ ka mma ka ị ghara ịzụta ihe ọkụkụ. O doro anya, n'ọdịnihu, a pụrụ itinye ubi ahụ n'ubi, ma na-amịpụtakwu osisi, ị na-agbaji njupụta nke ala gburugburu ndị fọdụrụnụ. Na mgbakwunye, usoro mgbọrọgwụ ha mebiri emebi.
Nlekọta Karọt dị ntakịrị: n'ihi na ndị toro eto, ọ na-ebelata na ịgbara mmiri na ịgha mkpụrụ, mgbe ụfọdụ ka ị na-etinye akwa, na n'oge germination iji wepụ ala. Oge kachasị mkpa maka oge nile na-eto eto bụ oge mgbe karọt ahụbeghị ka ome, n'oge a, ọ dị ezigbo mkpa iji gbochie ikuku eriri n'elu.
Ịgbachi. Na - emekarị, ọ dị mkpa ka usoro rụọ ọrụ mgbe mmiri ozuzo gasịrị: a na - eme ka elu ụwa dị elu ma na - egbochi ikuku na - abanye n'ime ala dị omimi nke ala. Maka ihe ubi dị ka carrots, ikuku na-eme ka ihe dị ka 5 cm dị mma. N'ihi nke a, ọ na-adaba iji mmiri ọkụ na-ezuru ezé, ma ọ bụ ndị na-azụ anụ ọhịa. Ịgbara Ozugbo akuku na tupu germination, mkpuru osisi choro nnukwu mmiri n'ime ihe omimi. Ọ bụrụ na a gwakọtara osisi ahụ ma kụọ n'okpuru ihe nkiri ahụ - tupu ntupu nke epulite ha kwesịrị inwe mmiri zuru ezu n'oge akuku. Ihe ọzọ, ọ bụrụ na a kụrụ osisi na-emeghe n'ala, ọ dịghị mkpa ime ihe n'emeghị ka mmiri sie ike. Ka anyị buru ụzọ kwuo banyere usoro mmiri mmiri: a ghaghị ime nke a nke ọma, n'ihi na osisi dị nso na mmiri mmiri dị ike nwere ike ịkụda ha n'elu ma ọ bụ "hammer" n'ime ala, nke ga-eme ka germination sie ike. Ọ kachasị mma iji mgbịrịgwụ ntanetị pụrụ iche, nke ga-enye ezigbo nrụgide na ikesa mmiri mmiri.
Achịcha kachasị nke carrots, ihe egwu egwu - karọt ada.
Ndị a bụ 4.5 mm ogologo pests ndị larvae parasitize karọt mgbọrọgwụ. Ekuku na-etinye nsen na ala gburugburu carrots, ebe ha na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ gburugburu ebe ha na-etolite na larvae. "Vita Ogologo" adighi adighi enwe ike ibuso ndi mmadu agha, dika anu na-etinye aka na otutu ihe di iche iche di iche iche di iche iche, ma ndi mmadu agaghi echekwa ya. Ọ dị mkpa ịmalite mgbochi na ịtọpụ ala ma na-etinye ala na-arịwanye elu na-arịwanye elu, si otú ahụ ị ga-emepụta ọnọdụ ọjọọ maka mmepe nke ụmụ ahụhụ na ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ịnwụ. A pụrụ ịkpọ ọgwụ chemical nke nchebe ọgwụ ọgwụ "Vega", "Decis Profi", "Inta-Vir", "Aklellik", onye ọ bụla n'ime ha nwere ntụziaka na mpaghara dị n'akụkụ nke ngwugwu ahụ. Akwa agrotechnical ngwaọrụ megide karọt ofufe na-akụ eyịm n'etiti carrots. Uru nke okpukpu abụọ a, n'ihi na ísì nke eyịm na-atụgharị efere efere, na ísì nke carrots - yabasị.
Ahụhụ 3-5 cm n'ogologo, dị oke egwu, na-eyi egwu ọ bụghị nanị na owuwe ihe ubi nke carrots, kamakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị ọrụ ubi na-arụ ọrụ ọtụtụ ụzọ iji merie Medvedka na e nwere ọtụtụ ihe ọmụma na Intanet banyere nke a. Maka onwe anyị, anyị na-ahụ ọgwụ "Medvetoks". Ndị a bụ ụlọ nkwakọba mmiri, nke a na-agbanye n'agbata ahịrị, wee wụsara ya na mmiri. N'ịbụ onye isi ísì na-adọrọ mmasị, bea na-eri nsi, nke na-eme mgbe awa 2-3 gasịrị. Mgbe ị na-agbaso iwu nchekwa, ọgwụ ahụ adịghị njọ nye ụmụ mmadụ na ụmụ anụmanụ, ma ọ bụ egbu egbu maka aṅụ na azụ.
Site na ụzọ ndị a na-ewu ewu, a pụrụ ịkpọ petals nke asters, ma n'ụzọ dị otú a, ọ bụghị mgbe nile ka a na-enwe mmetụta a chọrọ.
Ndị okenye na larvae nke wireworm.
Wireworm bụ nwa ogwu nke na-enye aka na mgbọrọgwụ nke ụfọdụ ọka na osisi nke ezinụlọ nightshade. Ngwunye waya na-eme ọtụtụ ihe na-emebi emebi, mana ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu maka nri nitrogenous na ọgwụ ndị a na-eji megide karọt ijiji.
N'ime carrots ndị ọrịa na-emetụtakarị ọrịa ndị na-akpata ọrịa: ọrịa nchara, ire nsị, nje bacteria. Rot amalite ngwa ngwa na oke iru mmiri na obere okpomọkụ. Akara ọma nke ọrịa ndị na-akpata ọrịa bụ ịgha mkpụrụ maka ọgwụgwọ potassium na potassium permanganate na mgbụsị akwụkwọ ala ala na Baikal EM-1, Baikal EM-5, Baktofit, Trikhodermin na ndị ọzọ yiri fungicides. I nwekwara ike iji mmiri mmiri Bordeaux ma ọ bụ Oxyhoma 2% ngwọta. Copper oxychloride bụ ọgwụgwọ a na-ewu ewu maka ọrịa ndị ọrịa, ma ọ dịghị atụ aro ya iji ya na saịtị maka ịgha mkpụrụ carrots, dịka ọgwụ ahụ nwere mmetụta na-ezighị ezi na uto mgbọrọgwụ ahụ.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nnukwu-fruited, elu-ekwenye ekwenye dịgasị iche iche na akwa idebe mma na ezigbo uto, ị ga-abụ n'ezie afọ ojuju na-esi na-eto eto carrots "Vita ogologo". Soro ntuziaka ma nata ezigbo owuwe ihe ubi. Ezigbo ihu!
Utu Senator: àgwà
Hardy mkpụrụ vaịn na-atọ ụtọ uto - Platovskiy iche iche
Akwụsịghị Egwu - Pisonia
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Elu-mkpụrụ karọt ọtụtụ Vita Ogologo